Ezypta: Nanohina ny mpamaham-bolongana Ezypsiana ny fakantahaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2009 10:42 GMT
Misy ve ny tranga-javatra tahaka ny maka tahaka bolongana? samy manana ny heviny ny mpamaham-bolongana Ezypsiana ao amin'ny fefin'ny Facebook sy any amin'ny bolongany rehefa hitany fa maka ampahan-dahatsoratra tsy nahazo alalana tamin-dry zareo ny gazety iray.
Bella Shereef ohatra nanangana vondrona iray mitory ny gazety El Shorouk noho ny nanatsongany lahatsoratra avy amin'ny mpamaham-bolongana tsy nahazoany alalana sy namoaka azy:
Mbola manohy fandikan-dalàna fanaony isan'andro mangalatra lahatsoratra avy amin'ny bolongana ihany ny gazety El Shorouk na dia eo aza ny fanoheran'ny mpamaham-bolongana.
Inona no ilaina? Tsy mividy ny gazety ary mampiseho ampahibemaso ny ataony. Tokony hifandray amin'ny mpifaninana aminy koa isika hanala baraka azy ireo.
Tsy manana mpandrindra (admin) moa ny vondrona ary nametraka fahafaha-maneho hevitra ifampizarana momba ny bolongana ho an'ny mpamaky azy ny gazety ao amin'ny takelaky ny bolongana.
Nanoratra teo amin'ny zoro fanehoan-kevitra i Bella:
Mazava loatra fa maneho ny famintinany amin'ny fanodikodina-doha mahafanina tahaka ny manome vahana ny mpamaham-bolongana izy ireo nefa manova, manaisotra ny ampahany amin'ny lahatsoratra avoakany tsy nahazoana alalana izy ireo. Mazava loatra fa hamaly araka izay fomba filazan'ny gazety ny mpamaky fa nahoana moa ny mpamaky no hanapa-kevitra amin'ny zavatra izay mifandraika mivantana amin'ny zon'ny mpamorona ataonay.
Hoy i Bent Al Kamar nanoratra tamin'ny bolongany:
Eto aho dia milaza amin'ny gazety El Shorouk fa omako alalana izy ireo handroba ahy fa tsy ekeko kosa ny hanivanana ahy; raha hangalatra ny lahatsoratra moa ianareo dia miangavy aho mba havoaka manontolo ny lahatsoratra. Raha lava loatra moa, ampahafantaro ahy mba hanitsiako azy sy hampihenako azy ho amin'isan-tsoratra tadiavinareo sy mifanaraka amin'ny tombotsoanareo.
Namoaka rohy amin'ny tsy fitovian-kevitra amin'ny mpamaham-bolongana izy eto, sy eto.
Etsy andaniny kosa, maro ny mpamaham-bolongana tsy mahita hokianina na anamelohana ny fanaon'ny gazety El Shorouk.
Mohamed Hamdy no nanoratra:
Izaho manokana dia mahita fa mazava ny lohateny manatsonga bolongana sy mpamaham-bolongana sy manitsy ny lahatsoratra hanana sehatra an-gazety ary mipetraka mazava ny anaran'ny bolongana sy ny rohy ary ny fanitsian natao dia tsy manova mihitsy ny lohahevitra ankapobeny. Mieritreritra aho fa izao ataon'i gazety El Shourouk izao dia ny mba hameno ny elanelana eo amin'ny famoahana an-taratasy sy an-tserasera – fironana izay natombok'izy rehefa navadika ho boky ka nisy ny novidian'ny maro (bestsellers) ny bolongana maro. Nanantena aho fa manorina kokoa ny natao sy ho amin'ny fampiroboroboana ny fahaizana fa tsy ho amin'ny fanimbana.
Shaimaa El Gammal koa namaly tamin'ny alalan'ny fifampizarana singam-baovao momba ny The Printed Blog (bolongana vita printy) any Etazonia:
Io no famoahana Amerikana voalohany miompana manokana amin'ny famoahana lahatsoratra avy amin'ny bolongana ary 300 ny mpamaham-bolongana nanasonia ny fanekeny amoahana ny lahatsorany hatonta printy ary ny andiany voalohany moa dia nivoaka ny 27 Janoary 2009. Nozaraina tsy nandoavam-bola tany Chicago, New York, ary San Francisco moa ny gazety mivoaka isan-kerinandro. Natao tamin'ny taratasy avolenta moa ny vokatra ary samy misy ny anaran'ny mpamaham-bolongana sy ny rohy avokoa moa isaky ny faran'ny lahatsoratra. Amin'ny ankapobeny moa dia mivoaka miaraka amin'ny sary tao amin'ny bolongana sy fanitsiana raha tsy maintsy natao moa izany.
Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra, Lasto Adri ao amin'ny Global Voices no nanoratra:
Mpanolotena mamahana ny Global Voices Online izay vohikala manasongadina ny feon'ny mpamaham-bolongana manerantany aho, ary eo ihany koa moa fandikan-teny ho amin'ny teny samihafa. Izay haizatra izay no nampanotany tena ahy ny amin'ny fahasamihafana misy ao amin'ny GVO sy izay ataon'i El Shorouk manatsonga lahatsoratra eoamin'ny takelany sy hoe nahoana moa ny mpamaham-bolongana izay mankasitraka ny ataoko amin'ny fanatsongana lahatsoratra, mametraka ao antsaina fa mamehy ny lahatsorany aho no tsy nahazo alalana mialoha tamin-dry zareo ihany koa no tezitra tahaka izao? Sa varotra ny ataon'i El Shorouk fa tsy maka tombom-barotra kosa ny GVO? Ahoana re ny metyho fahatsapany raha fantany fa manatsonga lahatsoratra avy amin'ny GVO matetika ihany koa ny New York Times? Moa ve misy ny fahasamihafana raha mampiasa farango sosona ny El Shorouk hampiharihary izay nalaina mivantana sy izay nahitsy? Ny fahadisoana hany nataon'ny El Shorouk dia ny tsy fahalalana na lahy na vavy ny mpamaham-bolongana – fahadisoanampahazo olombelona raha jerena ny halehiben'ny tontolom-bolongana ezypsiana. lazaiko tsotra, tsy mamely na iza na iza aho, fa natsangana izao adihevitra izao mba hampiheveran-tena fa iharan'ny tsy rariny (ny sasany) … Nahoana moa no tsy nitroatra ny mpamaham-bolongana – ary tafiditra amin'izany ny tenako – rehefa maka sary avy amin'ny aterineto nefa tsy miezaka ny hahalala izay tompony akory?